Sawirro – Haweeney aan raashiin cunin muddo 60 sano ah. | Radio Himilo
Home / Features / Sawirro – Haweeney aan raashiin cunin muddo 60 sano ah.
Sawirro – Haweeney aan raashiin cunin muddo 60 sano ah.
Posted by: radio himilo in Features, Wararka September 17, 2017	0 32 Views
Muqdisho – Saraswati Bai, oo 75-jir oo Hindiya ku nool waxay sheegataa inaysan cunin cunno – bariis iyo wax kale oo engegan – 60-kii sano ee lasoo dhaafay. Marka laga yimaado hal moos toddobaadkiiba – oo waliba ay marmar cunto – waxay kaliya ku nooshahay biyo iyo shaah.
Previous: Sawirro – Haweeneyda ugu baararka dheer adduunka.
Next: Ousmane Dembele oo 3-4 bilood dhaawac ku maqnaan doona.